Wasiir dowlihii hore arrimaha deegaanka Soomaaliya oo Muqdisho lagu aasay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaWasiir dowlihii hore arrimaha deegaanka Soomaaliya oo Muqdisho lagu aasay
June 28, 2016 Puntland Mirror Somalia, South-Central 0
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud oo ka qaybgalay salaada janaasada ee wasiir dowlihii hore arrimaha deegaanka.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasiir dowlihii hore ee arrimaha deegaanka Soomaaliya, Burci Maxamed Xamsa kaasoo lagu dilay weerar ay al-Shabab ku qaaday Sabtidii lasoo dhaafay huteel kuyaala Muqdisho ayaa maanta lagu aasay magaalada Muqdisho.
Xamsa ayaa kamid ahaa ilaa iyo 17 qof kuwaasoo lagu dilay 25-kii Juun huteel Naasahablood ee magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya.
Munaasabada salaada janaasada ayaa waxaa kasoo qaybgalay saraakiil dowlada ah oo uu kamid ahaa Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud iyo qoyskii wasiir dowlihii hore.
Burci Maxamed Xamsa ayaa sidoo kale kamid ahaa golaha baarlamaanka Soomaaliya waxaana uu noqonayaa xildhibaankii lix iyo tobnaad oo lagu dilo Muqdisho afartii sanno ee u dambaysay.